Free० नि: शुल्क आउटडोर विज्ञापन मकअपहरू र मउपी मकअप | क्रिएटिव अनलाइन
मुपी मकअप र आउटडोर विज्ञापन मकअपहरू
मानुएल रामीरेज | | पुनरावृत्त
जब हामी डिजाइन योजना गरिरहेका हुन्छौं (या त विज्ञापन ग्राफिक्स वा वेब डिजाइन) प्रस्तुति र उपस्थिति एक सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो यसको। भाग्यवस, आज हामीसँग धेरै संख्यामा संसाधनहरू छन् जुन हामीलाई उत्पादन, अवधारणा वा विचार प्रस्तुत गर्न सजिलो बनाउँदछ।
यी संसाधनहरूलाई मकअपहरू र भनिन्छ सामान्य कुरा यो हो कि तिनीहरू psd ढाँचामा उपलब्ध छन् र स्मार्ट वस्तुहरू द्वारा प्रयोग गर्नका लागि तयार छन्. तल तपाईले १d नि: शुल्क आउटडोर विज्ञापन मकअपहरू psd ढाँचामा हेर्न सक्नुहुन्छ।
1 नि: शुल्क बस स्टप ब्रान्डि।
2 नि: शुल्क होर्डिंग मकअप PSD
3 नि: शुल्क रोड ब्यानर स्ट्रीमर मकअप PSD
4 नि: शुल्क वाहन ब्रान्डिंग मकअप PSD
5 नि: शुल्क लन्डन बस ब्रान्डिंग मकअप PSD
6 नि: शुल्क आउटडोर विज्ञापन PSD मक-अप
7 नि: शुल्क बस ब्रान्डिंग मकअप PSD
8 नि: शुल्क भ्यान मकअप PSd
9 नि: शुल्क बस शेल्टर ब्रान्डिंग मकअप PSD
10 सुन्दर नि: शुल्क बिलबोर्ड मकअप PSD
11 आउटडोर पोस्टर मकअप PSD टेम्पलेट
12 सानो बिलबोर्ड पीक PSD
13 भित्री विज्ञापन पोस्टर
14 इन्डोर विज्ञापन पोस्टर ०२
15 बस स्टप बिलबोर्ड
16 बस स्टप बिलबोर्ड 02
17 १० शहरी पोस्टरहरू
18 सडक बिलबोर्ड
19 पसल विन्डो को लागी विज्ञापन
20 पर्खाल भित्ता चिन्ह
21 पर्खाई भित्ता चिन्ह 05
22 पर्खाई भित्ता चिन्ह 03
23 पर्खाई भित्ता चिन्ह 02
24 Excellent उत्कृष्ट पब पोस्टरहरू
25 पर्खाई भित्ता चिन्ह 010
26 विन्डोज साइनेज
28 भिन्टेज लोगोहरू आल्प्स
29 Quay बार
30 मुपी मकअप
नि: शुल्क बस स्टप ब्रान्डि।
को लागी एक बाहिरी विज्ञापन ध्यान आकर्षित गर्ने सोच फ्रेम गर्नुहोस् त्यो चरा उडान संग।
नि: शुल्क होर्डिंग मकअप PSD
उही, तर संग अन्य प्रकारको विज्ञापनको लागि एक आकार भर चित्र राम्रो देखिन्छ।
रचनात्मक विज्ञापनको २० उदाहरणहरू
नि: शुल्क रोड ब्यानर स्ट्रीमर मकअप PSD
धेरै विशेष फन्टको साथ घटना हुन सक्छ के लागी ब्रान्ड पहिचान.
नि: शुल्क वाहन ब्रान्डिंग मकअप PSD
इकोलोजिकल र र by्गबाट ​​प्रेरित जुन उत्तम सम्बन्धित छ त्यो भावनाको लागि, यो बिभिन्न कारणहरूको लागि पूर्ण मकअप।
नि: शुल्क लन्डन बस ब्रान्डिंग मकअप PSD
ठूला आयामहरूका लागि यो बसका लागि उत्तम मकअप.
नि: शुल्क आउटडोर विज्ञापन PSD मक-अप
निर्णय र केहि चिह्नित फन्टको साथ सरल राम्रोसँग परिभाषित तिरस्कार लाइनहरु.
नि: शुल्क बस ब्रान्डिंग मकअप PSD
पूर्ण रूपमा एक बीमाकर्ता को लागी जो विश्वास को विचार मार्क गर्न चाहान्छ कम्पनी मा।
नि: शुल्क भ्यान मकअप PSd
A को लागि अर्को मकअप रातो मोटिफ र प्रत्यक्ष टाइपफेसको साथ सवारी.
Colors रंगहरू विज्ञापनमा सब भन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ
नि: शुल्क बस शेल्टर ब्रान्डिंग मकअप PSD
एक लागि कुनै धूमधाम बिना बस स्टप र त्यो सीधा कुरा मा जान्छ।
सुन्दर नि: शुल्क बिलबोर्ड मकअप PSD
Un फर्निचर मा फ्रेम डिजाइन.
आउटडोर पोस्टर मकअप PSD टेम्पलेट
न Orangeहरूका लागि सुन्तला रंग विकर्ण लाइनहरु कि छवि को लागी एक बिस्त सार.
सानो बिलबोर्ड पीक PSD
अन्यमा आकार फराकिलो र उही मोटिफको साथ सुन्तलामा।
भित्री विज्ञापन पोस्टर
विशिष्ट पोष्टरको लागि हामी एउटा मलमा पाउन सक्छौं धेरै आकर्षक फन्टको साथ।
इन्डोर विज्ञापन पोस्टर ०२
भन्दा बढी एक धेरै विशेष डिजाइनको साथ ह्यामबर्गरको पोस्टर ग्राफिक.
बस स्टप बिलबोर्ड
Si कारण लुगा र फेसन हो, बस स्टपको लागि यो मकअप।
बस स्टप बिलबोर्ड 02
अन्य अघिल्लो संस्करण.
१० शहरी पोस्टरहरू
विभिन्न आकारका दशवटा शहरी पोस्टरहरू फ्लोरोसन्ट हरियो मा मोटिफ संग।
Un कला प्रदर्शनका लागि उत्तम मकअप.
पसल विन्डो को लागी विज्ञापन
यदि तपाइँ एक खोल्न जाँदै हुनुहुन्छ भने एक राम्रो स्पर्श संग विशेष स्टोर, यो तपाईंको लागि हो।
पर्खाल भित्ता चिन्ह
अन्य डिजाईनमा उत्कृष्ट पोस्टर.
पर्खाई भित्ता चिन्ह 05
यो गर्न सक्ने लोगोका लागि ठाडो लाइनहरू "M" अक्षरबाट सुरू हुने कुनै पनि स्टोरमा फिट.
पर्खाई भित्ता चिन्ह 03
बेकरी वा सबै प्रकारकाका लागि उत्पादनहरू जुन हातले बनाएको हो.
पर्खाई भित्ता चिन्ह 02
अघिल्लोको समान लक्ष्यको साथ अर्को, तर ब्रेकफास्ट र खाजामा बढी सम्बन्धित छ.
Excellent उत्कृष्ट पब पोस्टरहरू
एक लागि पदार्थको पब र त्योसँग यसको "त्यो" छ, उत्तम भन्दा बढी। पाँच मध्ये कुनै पनि उत्कृष्ट कारीगरी हो।
पर्खाई भित्ता चिन्ह 010
बियर र एक पोस्टरको लागि राम्रो पेय एक बिट hipster र पुरानो।
una आधुनिक बर्गर संयुक्त मोती संग गर्न सक्छ यो बाहिरको चिन्ह।
एक लागि घटना केन्द्रीय अक्ष हो डिजाइन, न त त्यो चित्रित।
भिन्टेज लोगोहरू आल्प्स
कुनै पनि प्रकारको लागि स्थापना जुन पहाडसँग सम्बन्धित छ.
डिजाइन कागज डु boat्गा केको लागि विशिष्ट.
यस उच्च रिजोलुसन म्पिपी मकअपलाई PSD ढाँचामा तपाईंलाई अनुमति दिन्छ तपाईंलाई लेयरहरू र स्मार्ट वस्तुहरू लाई तपाईंको डिजाईन गर्न अनुकूलन गर्न अनुमति दिनेछ। सडक वा शपिंग सेन्टरमा हुन सक्ने मउपिस र क्यानियोपिसका लागि विशेष।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » मुपी मकअप र आउटडोर विज्ञापन मकअपहरू
जिम्प वा फोटोशपको साथ कसरी टेन पाउने?
GIMP कसरी प्रयोग गर्ने जान्नको लागि आधारभूत ट्यूटोरियल